Android Version: vaovao, fanavaozana, bibikely sy maro hafa | Androidsis
Fantatsika rehetra fa tsy misy farany Rahavavy miasa, izany rindrambaiko izay manampy antsika hanao ny solosaina na ny fitaovana finday hiasa tsy misy olana. Afaka mahita ireo mahazatra indrindra isika, toy ny Windows, fa misy koa ny hafa izay tsy voamariky ny olona indraindray, toy ny tranga hatramin'izao. Android. Amin'ity habaka ity dia ahitanao ny zava-drehetra mifandraika amin'ny rafitra fiasa, toro-hevitra, fampahalalana ary izay rehetra misy ifandraisany amin'izy ireo.
Isan-taona dia mamoaka kinova vaovao i Android miaraka amina endrika sy fanatsarana vaovao. Lazainay aminareo rehetra ny momba ny Android farany, fanavaozana ary tsaho momba ny famoahana ho avy.
Tamin'ny taona 2018, 10 taona taorian'ny nanombohana ny Android tamin'ny tsena. Ny rafitrasan'i Google dia nanana fivoarana miavaka nandritra ny taona maro. Mihabetsaka ny mpanamboatra mampiasa an'io rafitra miasa io, ny be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, ary nandritra ny taona maro dia efa navoaka ireo kinova samihafa.
Isaky ny kinova Android vaovao, misy fiasa vaovao sy fanatsarana lehibe tonga amin'ny rafitra fiasa. Manaraka izany dia hiresaka momba ireo kinova ireo izahay, mba hahafahanao mahazo hevitra mazava momba ny fivoarana niainany nandritra ny taona maro.
Ny kinova voalohany an'ny rafitra fiasa dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 23 septambra 2008. Ny telefaona voalohany nampiasa izany dia ny HTC Dream. Ny rafitra fandidiana dia tsy tonga lafatra, fa ianao kosa afaka mahita maso ny mety ho lasa rehefa mandeha ny fotoana.
Fomba sasantsasany izay mbola misy ankehitriny dia efa natolotra, toy ny fampifanarahana amin'ny Gmail, ny fampiharana Google toy ny Maps, Kalandrie, Contact, YouTube na ny motera fikarohana Google ao amin'ny fitetezana. Android Market (ny kinova voalohany amin'ny Google Play Store) dia natokana ho an'ny mpampiasa ihany koa. Na dia tamin'ny volana voalohany aza dia tsy afaka nividy fampiharana ianao.
Nandritra ny taona 2009, kinova fanampiny maro no navoaka, Banana Bread 1.1, Cupcake 1.5 ary Donut 1.6. Izy io dia andiana kinova mpanelanelana izay nanombohana fiasa vaovao, ankoatry ny fanatsarana ny interface Android. Ny zava-dehibe indrindra dia ny Android 1.6 Donut, izay nanamarika ny fahatongavany ho an'ny besinimaro. Ny HTC Magic no telefaona quintessential tamin'izany dingana izany.
Tamin'ny 26 Oktobra 2009, tonga tamin'ny fomba ofisialy ny kinova faharoa an'ny rafitra fiasa. Vaovao maro no tonga niaraka tamin'izany, maro amin'izy ireo no mbola manatrika ankehitriny. Nampidirina ny fitetezana teo amin'ny Google Maps, nohavaozina tanteraka ny navigateur ary namboarina ho azo ampiasaina izao ny efijery.
Ny fampidirana ny fitetezana ao amin'ny Google Maps dia singa iray lehibe ho an'ny Android. Koa satria ny finday avo lenta dia nanjary fitaovana azon'ny mpampiasa nampiasaina hampiorenana ny tenany na handaminana ireo làlana. Fandraisana andraikitra lehibe ho an'ny mpampiasa. Ny iray amin'ireo telefaona nampiasa ity kinovan'ny rafitra ity dia ny Galaxy S. Ilay taranaka voalohany avo lenta ankehitriny amin'ny marika Koreana.
Volana vitsivitsy taty aoriana, tamin'ny 20 Mey 2010, tonga i Froyo. Amin'io lafiny io dia azonao atao ny mahita ny asan'ny Google tsy tapaka manatsara ny rafitra fiasa miaraka amina fiasa vaovao sy fanovana ny endrika. Ity kinova ity dia iray amin'ireo nahatratra mpihaino marobe ary ho an'ny mpanjifa an-tapitrisany ny fifandraisany voalohany amin'ny Android.
Ny compiler Dalvik, ny baikon'ny feo na ny mifanentana amin'ny Adoble Flash no fanovana lehibe avelan'ity kinova vaovao an'ny rafitra miasa ity eto amintsika. Miaraka amin'ity kinalan'ny rafitra ity dia tonga teny an-tsena ihany koa ny HTC Desire. Finday iray nankafizin'ny mpanjifa fatratra.
Tamin'ny faran'ny taona 2010 dia nanana kinova Android vaovao izahay teny an-tsena. Raha toa ireo teo alohan'izay efa nanao dingana lehibe tamin'ny fandrosoany teo amin'ny tsena dia mety ity kinova ity no fanitarana azy ireo. Io no kinovan'ny rafitra namboarina indrindra, tamin'ny lafiny rehetra. Na amin'ny lafiny famolavolana sy ny asany.
Ao aminy, ny fanohanana ireo sensor tahaka ny gyroscope na ny barometre dia nampidirina voalohany. Ho fanampin'izay, ho an'ny telefaona maro dia io no kinova farany azony, satria nanomboka nijanona tsy nanome fanampiana intsony i Google. Zava-dehibe ihany koa izany satria niaraka taminy, ny Samsung Galaxy Note voalohany dia tonga teny an-tsena.
Martsa 2011, telo volana monja taorian'ilay kinova taloha dia manana Android vaovao vonona izahay. Tsy dikan-teny fotsiny izany, satria nahatratra ny tsena teo afovoan'ny fisondrotan'ny takelaka izany. Noho io antony io dia namboarina ny kinovan'ny rafitra fiasa izay mifanaraka amin'ny takelaka ihany koa.
Raha ny marina, ity kinova 3.0 ity dia mifanaraka amin'ny takelaka ihany. Nanamarika ny fidiran'ny Google amin'ity fizarana tsena ity. Izy io dia kinova natao hampiasaina amin'ny efijery lehibe kokoa, miaraka amina fiasa sy widget vaovao, ary koa fomba amam-panao multitasking hafa. Fotoana fanitarana teo amin'ny tsena ity, izay marika marobe no nety hitranga amin'ny modely.
Android Sandwich Sandwich 4.0
Volana maromaro taty aoriana, tamin'ny faran'ny taona 2011, manokana ny 12 Oktobra 2011, dia natomboka ny kinova 4.0 an'ny rafitra fiasa. Ny kinova Android dia nantsoina hampivondrona ny zava-drehetra. Satria natao ho an'ny telefaona sy ny takelaka io. Nanamarika ny fiandohan'ny vanim-potoana vaovao ho an'ny rafitra fiasa.
Raha ny fahitana azy dia fiovana lehibe ho an'i Google izany. Nampidirina ireo fiasa toy ny fampiasana ny widget amin'ny efijery hidin-trano, ny bokotra eo amin'ny efijery, ary ny fahaizana mamafa ireo fampandrenesana amin'ny fihetsika. Nanamarika ny fahatongavan'ny Android Beam tamin'ny fomba ofisialy teny an-tsena ihany koa. Motorola dia iray amin'ireo marika niavaka tamin'izany fotoana izany, miaraka amin'ireo maodely toa ny Moto RAZR.
Ny kinova manaraka ny rafitry ny fandidiana, navoaka tamin'ny Jona 2012, no iray amin'ny malaza indrindra hatreto. Ankoatry ny maha-iray amin'ireo orinasa nanana ny fisiany betsaka teo amin'ny tsena manerantany. Niova be ny traikefan'ny mpampiasa, satria ny rafitra dia namaly tamin'ny fomba mora kokoa. Ny fampiasana dia tsara kokoa.
Ny baikon'ny feo sy ny fahatongavan'i Google Now dia lafiny roa manan-danja indrindra amin'ny Android Jelly Bean. Nihatsara ny fampandrenesana ary tonga ihany koa ny Project Butter, izay misy lanjany lehibe eo amin'ny rafitra. Ny Sony Xperia Z no lohalaharana tamin'izany fotoana izany. Misaotra ny fakantsary 13 MP ary tsy mahazaka rano, iray amin'ireo telefaona Android voalohany amin'ity lafiny ity.
Android 4.4 KitKat dia kinova izay mbola tian'ny mpampiasa maro ankehitriny. Izy io no nametraka ny fototry ny rafitra fandidiana ankehitriny. Google dia nanisy teknolojia manan-danja maromaro, izay mbola misy ao amin'ny rafitra fiasa ankehitriny. Ho fanampin'izay, nanamarika ny fahatongavan'ny baikon'ny Ok Google.
Ny endrika dia nitohy tamin'ny fivoarany, miaraka amina madio kokoa sy ahazoana aina kokoa hampiasa interface. Ho fanampin'izay, namboarina ny fanatsarana mba hiasa tsara hatrany ny finday ambany amin'ny fotoana rehetra. Nampitaina tamin'ny fitaovana koa ny fandraisam-peo.
Nalefa tamin'ny Novambra 2014, iray amin'ireo kinova ireo izay niteraka fientanam-po manokana teo amin'ireo mpampiasa Android. Tsy zavatra hahagaga izany satria iray amin'ireo namela fiovana lehibe ho antsika. Ny Material Design dia nanao ny fidirana miaraka amin'ity kinova ity amin'ny rafitra fiasa. Io no fiovana lehibe voalohany nilaozany taminay.
Midika koa izany ny fahatongavan'ireo mpanodina 64-bit vaovao, satria manohana azy ireo izao ny Android. Natolotra koa ny fanohanana Multiscreen, nahatratra ny rafitra fandidiana ny Smartlock ary tonga ihany ny Project Volta.
Tamin'ny Oktobra 2015 dia efa eny an-tsena ny kinova Android fahenina. Dika mitohy, izay nazava fa efa nanana hevitra mazava tsara momba ny zavatra tadiavin'izy ireo amin'ny rafitra fiasa i Google. Saingy, mitazona ny fironana hampiditra fanatsarana lehibe ao.
Amin'ity kinova ity dia tapaka ny hevitra hanatsarana izay efa misy ao amin'ny Android. Tsy nisy fiovana lehibe, saingy nisy fanatsarana maro, natao hanomezana fampisehoana tsaratsara kokoa. Nihatsara ny fitantanana bateria, azo zahana ankehitriny ny fahazoan-dàlan'ny fampiharana ary eto no misy ny fitahirizana adaptatera. Nentiny niverina tamin'ny telefaona Android ihany koa ny karatra SD. Google Now koa dia nanolotra ny On Tap, izay nanorina ny fototry ny Google Assistant ankehitriny.
Fampivoarana tena vao haingana, izay tato anatin'ny volana vitsivitsy izay no be mpampiasa eran'izao tontolo izao. Saika manaloka ny fahatongavany ny fandefasana ny Google Pixel. Ny fikarohana ny feo dia iray amin'ireo lakilen'ity kinova Android ity. Famaritana fiteny haingana ihany koa. Na dia ny fiasan'ny maro be aza dia ny fikandrana maro. Zavatra efa tonga niaraka tamin'i Nougat.
Toy ny kinova teo aloha, Google dia nanolo-tena hanohy hanatsara ny lafiny maro ankehitriny ao amin'ny rafitra fiasa. Somary miadana ny fandrosoany eo amin'ny tsena, saingy fantatra fa satro-boninahitra toy ny kinova izay nijanona tamin'ny fanatsarana sy ny traikefan'ny mpampiasa tsara.
Navoaka tamin'ny Aogositra 2017, ity kinova Android ity dia antsoin'ny maro ho mahay indrindra indrindra. Google Assistant dia natambatra tao amin'ny Android, ary nanazava fa efa singa iray manan-danja amin'ny paikadin'ny orinasa amerikana izy io. Ho an'ny ambiny, fanatsarana kely no tonga teo amin'ilay rafitra.
Fanatsarana amin'ny famenoana autocomplement, fampidirana ny Mode-in-Picture Mode. Ankoatry ny fampiharana eo noho eo, izay azonao andramana nefa tsy mila apetrakao, zavatra azo atao koa amin'ny lalao. Fampivoarana iray izay niaraka tamin'ny taranaka faharoa amin'ny Google Pixel. Ny Pixel 2 XL dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo modely feno kalitao indrindra sy avo lenta avoaka amin'ny Android.
Ny kinova farany indrindra an'ny rafitry ny fandidiana hatreto, navoaka tamin'ny Aogositra 2018. Dika iray izay misy ny faharanitan-tsaina eto hijanona amin'ny Android. Natao hampiasa ny rafitra fandidiana amin'ny fomba vaovao ireo mpampiasa. Zavatra hita taratra amin'ireo fihetsika.
Ny fanatsarana dia natao ihany koa amin'ny fitantanana bateria, ny famirapiratan'ny adaptif. Ho fanampin'izay, hitantsika ny fomba nahatonga ny notch ho lasa singa iraisan'ny telefaona. Zavatra manery ny rafitra sy ny fampiharana hifanaraka amin'ity endriny vaovao ity amin'ny finday Android.
Ahoana ny fametrahana Android amin'ny VirtualBox ary mankafiza Android amin'ny PC
Ny fomba tsara indrindra hankafizana Android amin'ny PC dia tsy amin'ny alàlan'ny fampiasana emulator toa ny BlueStacks, fa ...
ny DaniPlay hace 4 volana .
Android 12 dia manolotra endrika vaovao sy fampiasa miaraka amin'ny fanovana tsy mampino
Nandritra ny Google I / O 2021, Google dia nanolotra ny kinova manaraka amin'ny rafi-piasan'ny findainy, Android 12. Ao amin'ny…
Ny kinova Android vaovao dia manatsara hatrany ny tahan'ny fananganana
Ny Android dia miavaka hatrany amin'ny fanaparitahana, noho ny fanaovana tsirambina ny ankamaroan'ny mpanamboatra izay rehefa ...
Raha tantanan'ny Android 7.1 ny findainao dia tsy maintsy ovainao izy amin'ny 2021 eny na eny
Ny iray amin'ireo olana atrehin'ireo mpampiasa Android dia ny fanaparitahana, olana kely ...
Android 11 dia manomboka tonga amin'ny Android TV
Tamin'ny fiandohan'ny volana septambra dia namoaka ny kinova farany an'ny Android 11 i Google, kinova izay tonga miadana tsikelikely ...
Android 11 dia eto aorian'ny volana fampandrosoana miaraka amin'ny topy mason'ireo mpamorona ary inona no lasa ...
Lisitra ofisialin'ny telefaona Xiaomi izay hanavao ny Android 11
Xiaomi dia nizara tamin'ny alàlan'ny dinika ofisialiny ireo telefaona izay hanavao ny Android 11 avy amin'ny ...
Android 11 dia tsy haneho ny sary rakikira lalaovintsika eo amin'ny efijery hidin-trano
Ny rafi-piasan'ny finday tsirairay avy dia samy manana ny safidiny namboarina manokana, miaraka amin'ny Android no resin'ny fihotsahan'ny tany. Amin'ny maha-mpampiasa Android ...
Google hisakana ny telefaona misy RAM 2GB tsy hampiasa Android 11 tanteraka
Nanomboka namoaka ny Android 11 beta i Google ary ao amin'ny torolàlana fanaingoana ny fitaovana asehony ...
Ny Ulefone S7 Go dia hanasongadinana ny Android Go (Oreo Edition)
Android P dia tsy ho tonga amin'ny Nexus
Motorola dia manavao ny Moto Z, Z2 Play, G Plus 4 ary bebe kokoa amin'ny Android Oreo
Ny fanavaozana ny Android Oreo dia miteraka tsy fahombiazan'ny Xiaomi Mi A1
Azonao an-tsaina ve ny Android tsy misy Google? Eelo dia afaka manatanteraka azy
Ny OnePlus 5 dia tsy hahazo vetivety ny fanavaozana ny Android Oreo
Fitaovana Android 8.1. Oreo kely fantatry ny mpampiasa
Lisitra feno an'ny telefaona Samsung izay hanavao ny Android Oreo
Manomboka mamoaka Android Oreo eo anelanelan'ny Moto Z Play sy Z2 Play i Motorola
Android Wear 2.6: Ny vaovao tonga amin'ny fanavaozana vaovao
Android 8.1 Oreo Ofisialy! | Atorinay anao ny vaovaony rehetra
Android 7.1.1 Nougat dia ho tonga amin'ny Samsung J5 (2016)
Fanalahidy fanandramana amin'ny isa fananganana aorian'ny fametrahana Nougat ao amin'ny Huawei P9 Lite anao? Eto ny vahaolana
Force Android 7.0 vaovao farany amin'ny Huawei P9 Lite